အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုများကြားမှ Eid al-Adha ဆုတောင်းပွဲများဆက်လက်ပြုလုပ်နေ ကဘူးလ်ရှိသမ္မတနန်းတော်၌ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချို့မှာကြောက်ရွံ့။ ဘာလုပ်ရမှန်းကိုမသေချာဘဲပေါ်လာသည်။ ဆုတောင်းချက်များကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပြီးသမ္မတ Ashraf Ghani လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အနှစ် ၂၀ အကြာတွင်နိုင်ငံခြားတပ်များဆုတ်ခွာသွားသောကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများမြင့်တက်လာနေစဉ်ယင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင် http://bit.ly/1rbfUog ကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ #BBCNews #အာဖဂန်နစ်စတန် #Kabul
Rockets could be heard exploding nearby during prayers in Afghanistan to mark the start of the Muslim festival Eid al-Adha.
Worship at the presidential palace in Kabul continued despite the attack, with some appearing frightened and unsure of what to do.
The prayers were being broadcast live and President Ashraf Ghani was in attendance.
The attack came amidarise in violence in the country, as foreign troops withdraw after 20 years.
#BBCNews #Afghanistan #Kabul
จับตาตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของประเทศจีน | Focus China
GoTo: The multibillion-dollar superapp behind Indonesia’s most valuable merger | CNBC Make It
برخورد چند موشک در ارگ ریاست جمهوری هنگام ادای نماز عید، واکنش امرالله صالح و ریس جمهور!
Record number of migrants cross English Channel onasingle day - BBC News
RICKY HARUN BERHENTI BANDEL SAAT BERTEMU HERFIZA | #TuturKata